Fri, Jul 10, 2020 at 12:27pm
भयो फाइनल डनकी नायिकाको, ‘डन ३’ मा न दीपिका, न त प्रियंका नै !
मुम्बई, फाल्गुन २७। शाहरुख खान, आनन्द एल रायको फिल्म ‘जीरो’ को सुटिङ सकाएपछि ‘डन ३’ को काम सुरु गर्दैछन् । ‘डन २’ रिलिजको झन्डै ७ वर्षपछि शाहरुख फेरि पर्दामा अन्डरवर्ल्ड डनको रुपमा देखिनेछन् । फिल्ममा प्रियंका चोपडा वा दीपिका पादुकोण लीड रोलमा हुने खबर थियो, तर अब फिल्ममा कुनै नयाँ नायिकालाई मौका दिइँदैछ । फिल्मका प्रोड्यूसर रितेश सिधवानीले आई.ए.एन.एस.सँग भने- 'दीपिका 'डन'..
राजधानीमा नयाँ थियटर, आकर्षक बनोट तथा आर्टका अनेक नमुना पनि समावेश
काठमाडौँ फागुन २५ । राजधानीमा नयाँ थियटर खुलेको छ। थापागाउँमा सञ्चालनमा आएको कुञ्ज नाटकघरको सत्यमोहन जोशी र राजनीतिज्ञ प्रदीप ज्ञवालीले मंगलबार संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे। बाँसैबाँसका सामग्रीबाट निर्माण भएको उक्त नाटकघरमा आकर्षक बनोट तथा आर्टका अनेक नमुना पनि समावेश गरिएका छन्। उद्घाटनपछि चिनियाँ साहित्यकार लु सुनको चर्चित कृतिमा आधारित नाटक ‘म्याड म्यान्स डायरी’ पनि मञ्चन गरिएको थियो। नाटकमा म्याड म्यानको भूमिका सुदाम सिकेले..
महेश बाबूको नयाँ फिल्म ‘भरत अना नेनू’ को टीजर सार्वजनिक, सामाजिक संजालमा भाइरल
२४ फागुन काठमाडौँ । तेलगु सुपरस्टार महेश बाबूको नयाँ फिल्म ‘भरत अना नेनू’ को टीजर सार्वजनिक भएको छ । टिजर रिलिज भएको २४ घण्टा नपुग्दै सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । आगामी २७ अप्रिलमा रिलिजको तयारीमा रहेको फिल्म यस अघि साउथ सुपरस्टार रजनीकांतको फिल्म ‘काला’सँग रिलिज गरिने तयारी गरिएको थियो । टिजर रिलिज भएको २४ घण्टा नपुग्दै युटुबमा ८४ लाख पटक हेरिएको..
आफ्नै आफन्तले बलिउड अभिनेता जितेन्द्रलाई लगाए यौन शोषणको आरोप
एजेन्सी, २५ फागुन : बलिउडका चर्चित अभिनेता जितेन्द्रलाई यौन शोषणको आरोप लागेको छ । ७५ बर्षीय जितेन्द्रलाई आफ्नै कजिनले यौन शोषणको आरोप लगाउदै एफआइआर दर्ता गराएकी हुन् । आफुलाई पीडित बताउँदै उनको कजिनले यो आरोप लगाएकी हुन् । घटनाको ४७ वर्षपछि उनीलाई यो आरोप लगाइएको हो । ‘जब म १८ बर्षकी थिए । जितेन्द्र २८ बर्षका थिए ।’ उनले अगाडि उल्लेख गरेकी छन्..
चोरी केशमा फसे नायक भुवन केसी, प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धी लफडा
काठमाडौँ, २३ फागुन नायक भुवन केसीलाई चोरीको आरोप लागेको छ । पुरानो गीत ‘उकालीमा पछि–पछि, ओरालीमा अघि–अघि यो केटा के भा’को? यही बोलको गीतका कारण नायक भुवन केसी लफडामा परेका छन् । केसीलाई ‘कृ’ फिल्मको ‘उकालीमा पछि–पछि, ओरालीमा अघि–अघि’ बोलको गीतमा चोरीको आरोप लागेको हो । अहिले यही गीत लफडामा परेर प्रहरीकहाँ मुद्धा चलिरहेको छ । ३३ वर्षअगाडि सयपत्री मुभिज्ले शम्भु प्रधानको..
हिरानीले आमिर खानको बायोपिक बनाउने, किताब लेख्न आमिरलाई सुझाव
फागुन २३ काठमाडौँ । बलिउड निर्देसक राजकुमार हिरानीले अभिनेता आमिर खानको बायोपिक फिल्म बनाउन तयार भएको जानकारी दिएका छन् । आफ्नी श्रीमती मनजीत हिरानीद्वारा लिखित पुस्तक ‘हाउ टू बी–लाइफ लेसन्स बाय बडी हिरानी’को विमोचन कार्यक्रममा फिल्म निर्माता तथा निर्देशक हिरानीले आमिरको बायोपिक फिल्म बनाउने इच्छा देखाएका हुन् । संजय दत्तको बायोपिक फिल्म बनाइरहेका राजकुमारले आमिरबारे लेखिएको किताब पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए । यसका लागि..
फागुन २१ काठमाडौँ । भारतीय अभिनेत्री तथा पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनी तीन बच्चाकी आमा बनेकी छिन । सामाजिक संजाल इन्स्टाग्रामबाट उनले यो कुराको जानकारी गराउदै आफ्ना फ्यानहरुलाई ठूलो सरप्राइज दिएकी हुन्। इन्स्टाग्राममा सन्नीले राखेको तस्वीरमा सन्नी दम्पत्तीका साथ तीन बच्चा देखिन्छन्, जसमध्ये एक छोरी र दुई छोरा हुन् । अश्वेत वर्णकी छोरी अली ठूली छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै सन्नी दम्पत्तीले धर्मपुत्री बनाएका थिए ।..
तामिल सुपरस्टार अभिनेता रजनीकान्तको आगामि फिल्म ‘काला’को टिजर रिलिज भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको टिजरको तमिल संस्करण यूट्यूबमा हिट हुन सफल भएको छ। रिलिज भएको ३ दिनमा टिजरले १ करोड ९ लाख भन्दा बढि भ्यू पाउन सफल भएको छ। यस्तै हिन्दी संस्करणले पनि १० लाख बढिको भ्यू बटुल्न सफल भएको छ। सदाझै यस फिल्मको टिजरमा रजनीलाई स्टाइलिस देखाइएको छ । उनी उमेर..
भजाईना मोनोलगः यौन अधिकारका लागि योनीका कथा
काठमाडौँ, फागुन १९ । ‘लाल सलाम भन्न छाडेर योनी सलाम भन्नुपर्छ ।’ योनीका कथाहरु अर्थात भजाईना मोनोलगमा यस्तै भनिन्छ । सन् १९९६मा अमेरिकी लेखिका ईभ एन्सलरले लेखेको भजाईना मोनोलग संसारभरका रंगमञ्चमा प्रर्दशन गरिन्छ । महिला यौन अधिकारका विषमा लेखिएको यो नाटकमा लेखिकाको आफ्नै अनुभव रहेकाले पनि यो नाटकलाई निकै शत्तिशाली मानिन्छ । ७८ बर्ष पहिले लेखिएको यो नाटक आज पनि विश्वभर उत्तिकै..
पोखरा थिएटरको पहिलो प्रस्तुति नाटक ‘सिरुमारानी’, सर्बत्र चासो र चर्चाको विषय
पोखरा, १५ फागुन : कला, संस्कृति र प्रकृतिको बरदान पाएको पर्यटकीय नगरी पोखरामा नवनिर्मित पोखरा थिएटरको पहिलो प्रस्तुति ‘सिरुमारानी’ यतिखेर सबैको चासो चर्चाको विषय बनेको छ । वरिष्ठ साहित्यकार सरुभक्तले लेख्नुभएको सिरुमारानी फागुन ३ गतेदेखि निरन्तर प्रदर्शन भएकामा यसले पोखरेली सर्वसाधारणको मन निकै आकर्षित गरेको पाइन्छ । पोखरा थिएटरमा पहिलोपटक मञ्चन गरिएको यो नाटकले सोचेभन्दा पनि बढी सफलता प्राप्त गरेको नाटकमा..
श्रीदेवीको निधनबारे विभिन्न आशंका, भारतमा तीव्र विवाद
काठमाडौँ, १५ फागुन दुबइमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको भनिएकी भारतीय चलचित्र जगतकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको मृत्युबारेमा विवाद उत्पन्न भएको छ । दुबईको अस्पतालले पोस्टमार्टम रिपोर्टमा श्रीदेवीको मृत्यु स्वभाविक रुपमा भएको होइन भनेर बयान दिएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमले श्रीदेवीको हत्या भएको हुनसक्ने आशङ्कासहितका समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण गरिरहेका छन् । श्रीदेवीको मृत्युको कारण हृदयघात, बाथ टबमा डुबेर, रक्सी पिएर अथवा कुनै षडयन्त्रका..
काठमाडौँ, १४ फागुन नेपाली चलचित्र नगरीमा पछिल्लो समयमा हाँस्य विधाका चलचित्रहरुले धमाधम सफलता पाईरहेका बेला निर्माणकर्ताहरु पनि यही विधाका चलचित्र निर्माणमा हौसिएका छन् । यसरी नै आम दर्शकहरुको रुचाई तथा मनोभावलाई बुझेर निर्माण गरिएको चलचित्र हो उनकै छोरी तरुनी हामीलाई के को दोष । हरेक अभिभावकहरुलाई आफना हुर्किएका सन्तानहरुको बिवाह गरेर घर बसाई दिने रहर हुन्छ नै । अझ हुर्किएकी छोरीको बारेमा..
चर्चित भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवीको असामयिक निधन, सम्पूर्ण बलिउड स्तब्ध
मुम्बई, १३ फागुन । भारतीय चलचित्र जगत बलिउडकी एकजना चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको गएराति निधन भएको दुःखद खबर छ । श्रीदेवी संयुक्त अरब इमिरेट्समा आफन्तको वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका बेला शनिबार राति उनलाई हृदयाघात भएको परिवारिक स्रोतले जनाएको छ । उनको निधनको समाचारले भारतीय सिने जगतका साथै उनलाई मनपराउने सर्वसाधारण सबै नागरिक स्तब्ध भएका छन् । साथै यस निधनप्रति भारतका चलचित्रकर्मी र शुभचिन्तकहरुले शोक..
एजेन्सी , ११ फागुन । बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन धेरै समय लाईमलाईट बाट हराए । अहिले उनको नयाँ तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । उनि सडकमा पापड बेच्दै गरेको देखिएका छन् । तर उनले रियल लाइफमा नभई रिल लाइफमा पापड बेचेका हुन् । यो दृश्य चलचित्र ‘सुपर ३०’को हो जहाँ ऋतिक नयाँ अवतारमा देखिँदैछन् । अहिले यो चलचित्रको छायांकन भइरहेको छ । सार्वजनिक भएको..
एजेन्सी , ११ फागुन । बलिउड निर्देशक रामगोपाल वर्माले आगामी फिल्म ‘गड सेक्स एण्ड ट्रुथ’मा पोर्नस्टारलाई ल्याएपछि इण्डिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएसन र अन्य महिला संगठनले वाइजेग प्रहरीको विरोध गर्दै ४८ घण्टाको भोक हड्तालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले महिलाको संवेदनशील विषयको खिल्ली उडाएको आरोप पगाएका छन् । महिलाहरुले विशाखापट्टनमको गान्धी शालिक अगाडि भोक हड्ताल सुरु गरेका छन् । महिलाहरुले प्रहरीले रामगोपाल वर्माको..
शाहरूखको सुपरहिट फिल्म ‘डन’ को तेस्रो सिरिज बन्ने , हिरोइनको चयन हुन बाँकी
काठमाडौं, १० फागुन । शाहरूख खान लाई बलिउडका ‘किङ खान’को उपनामले पनि चिनिन्छ । उन्को फ्यानहरुलाइ खुसीको खबर अब शाहरूखको सुपरहिट फिल्म ‘डन’को तेस्रो सिरिज पनि बन्ने भएको छ । रितेश सिधवानी र फरहान अख्तर दुवै फिल्म निकै ठूलो राम्रो बनाउन चाहान्छन् । अहिले स्क्रिप्टको काम भइरहकेो छ । फिल्म डिसेम्बरबाट फ्लोरमा जाने अनुमान गरिएको छ । फिल्ममा हिरोइन कसलाई लिइने..
संसारका सबैभन्दा बढी कमाउने १० फिल्महरु कुन कुन हुन् ? जानिराखौ .....
काठमाडौं, १० फागुन । हलिउडमा धेरै चलचित्रहरु बनिरहेका हुन्छन । ति चलचित्रको लगत पनि धेरै नै हुन्छ । बढि बजेटमा बनिएका चलचित्रले बक्स अफिसमा धमाका नै मचाईरहेका हुन्छन । थाहा पाउनुहोस कुन १० चलचित्रले धेरै कमाई गरेका छन् । १. अवतार फिल्म ‘अवतार’ पछिल्लो ८ बर्ष देखि संसारको सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म बनेको थियो जसलाई निर्देशक जेम्स क्यामरोनले निर्देशन गरेका थिए । यो..
काठमाडौं, ९ फागुन । टाइगर श्राफले आफ्नो आउँदो फिल्मको लागि आफ्नो शरीरलाई निकै कसिलो बनाएका छन् । साथै अब ‘बागी’ को तेस्रो सिक्वेल पनि बन्ने लगभग पक्का-पक्की जस्तै भएको छ । निर्माण पक्षले ‘बागी २’ रिलिज नहुँदै ‘बागी ३’ बनाउने घोषणा गरेको हो । यो फिल्ममा पनि टाइगरको मुख्य भूमिका हुने बताइएको छ । ‘बागी २’ को ट्रेलर नै हालसम्म सार्वजनि..
फागुन ९, २०७४ सलमानको मित्रता र दुश्मनीको किस्सा धेरै छन् जहाँ उनि मित्रको "गडफादर" नै बन्दछन् भने दुष्मनको सेखि नै झार्छन । उनी आफ्ना साथीहरूका लागि जस्तोसुके सहयोग गर्न तत्पर रहन्छन भने अर्कोतीर दुश्मनी साँध्नेहरूलाई कहिल्ये माफी दिदैनन्। बलिउडका अहिलेका चर्चित गायक अर्जित सिंह यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। समलान र अर्जितको दुश्मनी सन् २०१४ बाट सुरू भएको हो। एक अवार्ड सोमा अवार्ड..
अवतारको सिक्वेल आउंदै , यसको बजेटले १० वटा बाहुबली चलचित्रको निर्माण गर्न सकिने
काठमाडौँ, ७ फागुन । के तपाईंले सन् २००९ मा सार्वजनिक हलिउड चलचित्र ‘अवतार’ हेर्नुभयो ? सायद हलिउड चलचित्र मन पराउने कमैले मात्र यो चलचित्र नहेरेको होला। यो अहिलेसम्मको विश्वकै सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने चलचित्र हो । यो चलचित्रले संसारभर हंगामा मच्चाउँदै २.८ अर्ब डलरको कमाइ गर्न सफल भएको थियो । चलचित्रका निर्देशक हुन् जेम्स क्यामरुन, जसको खातामा एउटा पनि फ्लप चलचित्र छैनन् ।..
काठमाडौँ , ७ फागुन । अक्षय कुमारको फिल्म ‘प्याडम्यान’ कमजोर बन्दै गएको छ । शनिवारसम्मको बक्सअफिस कलेक्सन रिपोर्ट अनुसार फिल्मको बिषयवस्तुलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाए पनि फिल्मले बक्सअफिसमा खासै कमालगर्न सकेको छैन । फिल्म प्रदर्शन भएको पहिलो दिनमा १० करोड २६ लाख रकम कलेक्सन गरेको थियो । त्यस्तै दोस्रो दिन १३ करोड ६८ लाख, तेस्रो दिन १६ करोड ११ लाख, चौथो दिन ५ करोड..
यी हुन् ५० काटेका बलिउड स्टार , जो अहिले पनि उत्तिकै जवान देखिन्छन्
काठमाडौं, ६ फागुन । तपाईं आफुंलाई ५० वर्षको हुँदा कस्तो रुपमा कल्पना गर्नु हुन्छ ! जवानी सकिएको कुरूप सरिरको कल्पना गर्नु हुन्छ होला ! पक्कै पनि ५० बर्ष उमेर नाघेपछि मानिसले आफ्नो उमेर ढल्केको महसुस गर्छ । तर बलिउडका स्टारहरूलाई हेर्दा लाग्छ की उनीहरूको जवानी सकिएको पटक्कै छैन । साधारण मानिसहरू पेन्सन पकाएर घरायसी काम गर्ने उमेरमा पनि बलिउडका स्टारहरूमा उस्तै..
चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’ को नेपालमा रिलिज अगावै हङकङमा प्रिमियर हुने
काठमाडौं, फागुन ६ । चलचित्र ‘ब्लाइन्ड रक्स’ को नेपाल रिलिज अगावै हङकङ प्रिमियर हुने भएको छ । हङकङले चलचित्रलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिदैँ प्रिमियर गर्न लागेको हो । चलचित्रको १ घन्टा ४८ मिनेटको रहेको छ । बायोपिक ड्रामा ‘ब्लाइन्ड रक्स’मा प्रतिभावान दृष्टिविहिन युवती सृष्टि केसीको कथालाई उठाइएको छ । चलचित्रमा सृष्टिको भूमिकामा अभिनेत्री बेनिशा हमाल प्रस्तुत भएकी छिन् । फागुन ६ गते प्रदर्शन हुन..
काठमाडौं, फागुन ४ । चलचित्र ’लम्फू’को तीन पोस्टर एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । पोस्टरमा मुख्य कलाकारहरु फिचरिङमा छन् । जसमध्य तरकालीवालीको नामले चर्चित कुशुम श्रेष्ठ पनि रहेकी छिन् । तीनवटै पोस्टरले कलाकारको लुक्सको झल्को दिन्छ । आगामी बैशाख २८ रिलीज गर्ने तयारीमा रहेको चलचित्रमा कबिर खड्का, मरिस्का पोखरेल, चाँदनी शर्मा, सञ्जित भण्डारी सलोन बस्नेत र कुशुम श्रेष्ठ को मुख्य अभिनय रहेको छ। चलचित्रमा..
काठमाडौं, ४ फागुन । नेपालीहरु प्राय: भारतिय टेलिभिजन कार्यक्रमहरु हेर्छन् । बेलुकी कसैकोमा टिभी बजिरहेको छ भने प्रायको च्यानल भारतिय भाषाको नै लगाईरहेको हुन्छ । तर बिस्तारै नेपाली टिभी च्यानलहरु पनि गुणस्तरको कार्यक्रम प्रसारण गर्न थालेका छन् । एपीवान टिभीको नेपाल आइडलको अपार सफलता पछि धेरै अन्तराष्ट्रिय स्तरका रियालिटी शो हरु आउने क्रममा छन् । त्यसै रुपमा अब टेलिभिजन रियालिटी शो..
टेलिभिजनमा फेरी फर्किंदै कपिल, ‘फेमिली टाइम वीथ कपिल’ लिएर आउंदै
काठमाडौँ , ४ फागुन । भारतिय कमेडिन कपिल शर्मा फेरी नयाँ टेलिभिजन शो लिएर आउने भएका छन् । उनको नयाँ कार्यक्रमको नाम ‘फेमीली टाइम वीथ कपिल शर्मा’ रहने भएको छ । कपिलको यो तेस्रो टेलिभिजन कार्यक्रम हो । सबैभन्दा पहिला उनको कार्यक्रम ‘कमेडी नाइट्स वीथ कपिल’ कलर्स च्यानलमा हिट भएको थियो । तर, केही विवादपछि यो कार्यक्रम बन्द भएको थियो । त्यसपछि उनले..
एजेन्सी~ काठमाडौं, ३ फागुन । बलिउड अभिनेता सैफ अली खानकी छोरी साराको सौन्दर्यको खुबै चर्चा हुनेगरेको छ । उन्ले बलिउडमा फिल्म ‘केदारनाथ’बाट डेब्यू गर्दैछिन् । तर सबैभन्दा चर्चित स्टारकिड्स साराको डेब्यू फिल्म ‘केदारनाथ’ संकटमा परेको छ । फिल्मका निर्माता र निर्देशबीच मनमुटाब सुरू भएको बताइएको छ । जसका कारण साराको बलिउड यात्रामा धक्का लाग्न सक्छ । निर्माता र निर्देशकबीच विवाद बढेपछि..
पुजा र सुदर्शनको चलचित्र ‘रामकहानी’ को छायाँकन सुरु
काठमाडौं, फागुन २ । निर्देशक सुदर्शन थापा र नायिका पुजा शर्माको लगानीमा बन्न लागेको चलचित्र ‘रामकहानी’को छायाङ्कन सुरु भएको छ । पोखराको माथिल्लो डाँडा कास्कीकोटबाट चलचित्रको शुभमुर्हत गरिएको हो । मङ्गलवार शिवरात्रीको दिनबाट रामकहानीको सुरुवात भएको हो । पहिलो दिनमा नायिका पूजा शर्मा, नायक आकाश श्रेष्ठ र कलाकार राजाराम पौडेलले टेक दिएका थिए ।चलचित्रलाई निर्देशक सुदर्शनले नै निर्दशन गर्दै छन् । ४५..
काठमाडौं, माघ २९ । करिब दुई वर्षपछि नायक अनमोल केसी अभिनित चलचित्र ‘कृ’ शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । सुरुवाती दिन सुखद ओपनिङ गरेको ‘कृ’को शनिवारको अधिकांश हलहरू हाउसफुल रहेको थियो । शुभचिन्तक र दर्शकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको ‘कृ’ले दुई दिनमा करिब २ करोड बढीको कमाई गरेको छ । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चलचित्रले पहिलो दि देशभरबाट ९७ लाख ३ सय ७५ रुपैयाँ कलेक्सन गरिएको..
काठमाडौँ, २८ माघ : नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विविध विधामा ख्यातिप्राप्त २० जना कलाकार भारतमा कलाकारितासम्बन्धी तालीम लिँदै छन् । यही माघ २९ देखि फागुन १९ सम्म भारतको पुनेमा फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एफटिआइआई)ले उपलब्ध गराउने तालीममा रासा सिद्धान्त, बोध सम्झाना, प्रस्तुति, दृश्यात्मक कार्य तथा ओठ तुल्यकालनजस्ता विषयमा जानकारी उपलब्ध हुनेछ । तालीम अवधिभर भारतीय कलाकारसँग कार्यशाला, नृत्य, योगा तथा बुम्बईस्थित..
Results 550: You are at page 14 of 19